Company Information – Medicare
MEDiCARE ဆိုင်များတွင် လစဉ်ပြုလုပ်ပေးသော ပရိုမျိုးရှင်းများကိုရယူရန် ယခုစာရင်းပေးသွင်းလိုက်ပါ၊၊
Lists Default List
-အအေးမိ၊ နှာစေး၊ ချောင်းဆိုး အတွက်ဆေးများ
-ဉ်ီးနှောက် အာဟာရဆိုင်ရာ ဖြည့်စွက်စာများ
-Collagen & Gluta
-သဘာဝ ဆေးဘက်ဝင် ပစ္စည်းများ
-Body Care & Accessories
-Pregnancy Test Strip
-Test Strip များ
-Hair Styling & Treatment
-Shower & Accessories
-Sun Protection Products
-Elbow Cream/Under Arm
-Shower & Shampoo
-Medicare Own Product
Customer charter |MEDiCARE Product and Exclusive Brands |Store information
The whole business is customer focused trying to stay ahead of customer expectations but on trend, aspirational without being unrealistic and bringing customers new discoveries on every visit.
We always try to live by our customer charter:
Money Back Guarantee: If you are not completely satisfied with any product purchased at MEDICARE, you can return it together with the receipt and haveafull refund or exchange within7days of purchase. Some conditions apply, e.g. colour cosmetics, prescription drugs and underwear cannot be returned.
No Fake Goods: MEDICARE only purchases genuine products from fully licensed companies. Strict procedures are in place to ensure we never knowingly sell fake products.
Freshest Quality Products: MEDICARE works closely with its suppliers to ensure that we only sell the freshest product with the longest life before expiry.
Never knowingly sell expired products: MEDICARE has strict internal procedures to ensure products are removed from sale before they expire.
New Discoveries on Every Visit: Our whole team is passionate about being first with new and exclusive products and offering the best and widest range possible in Health and Beauty.
Cleanliness: We aim to consistently maintain the highest standards of cleanliness throughout the store andaprofessional, modern shopping environment.
Service: MEDICARE is passionate about customers receiving consistent excellent service from friendly, knowledgeable and confident staff on every visit.
We know we don’t always get it right and would appreciate you letting us know when we fail to meet your expectations.
MEDiCARE PRODUCT AND EXCLUSIVE BRANDS
The Commercial team at MEDICARE are dedicated to keep customers on trend with the latest technological developments on heath, beauty and personal care and bringing those products to the shelves quickly at an affordable price.
If there are new product developments in the global market which our customers would find interesting and important but not available in Vietnam then our team will source and importagenuine & affordably priced range to be sold exclusively for MEDICARE customers.
The MEDICARE branded product must live up to the trust and values long established between customers and the company. All MEDICARE branded product must comply with the latest regulations on ingredients, manufacturing process, testing, labeling, storage and distribution.
MEDiCARE Myanmar (ကျောက်တံတား- 001) -နံပါတ် ၁၀၄/၁၁၂၊ ၅ လမ်း ၊ ၃၇ နှင့် ၃၈ လမ်းကြား ၊ အနော်ရထာလမ်းမပေါ်၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်။ ဖုန်းနံပါတ် – 09969947311 ကားမှတ်တိုင် – ပန်းဆိုးတန်းကားမှတ်တိုင်
MEDICARE Myanmar(ဘားလမ်း – 035)
အမှတ် – 191,မဟာဗန္ဓုလလမ်း(သို့)ဘားလမ်း,အလယ်ဘလောက်, ၂ ရပ်ကွက်,ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ရန်ကုန်မြို့။(Near Islam Hospital)/ဖုန်းနံပါတ် – 09977638526။
MEDICARE Myanmar(စမ်းချောင်း -ဗဟိုလမ်း – 036) -အမှတ် 167/169,မြေညီထပ်(အလယ်)၊ဗဟိုလမ်းမပေါ်၊ပန်းတနော်လမ်းထောင့်၊စမ်းချောင်းမြို့နယ်၊ရန်ကုန်မြို့။ဖုန်းနံပါတ် – 09977638551
MEDiCARE Myanmar (ဗဟိုလမ်း – 024 ) – အမှတ် ၂၂၃ ၊မြေညီထပ်၊ ဗဟိုလမ်း ၊ အင်္ဂပူလမ်းထောင့်၊ စမ်းချောင်း ။ ဖုန်းနံပါတ် – 09 977 872117
MEDiCARE Myanmar (ကျွန်းတောလမ်း – 050) – အမှတ်(၈၂)၊ကျွန်းတောလမ်း၊ကျွန်းတောရပ်ကွက်၊စမ်းချောင်းမြို့နယ်၊ရန်ကုန်မြို့။ဖုန်းနံပါတ် – 09977638591
MEDiCARE Myanmar ( ကျောက်မြောင်းဈေး မှတ်တိုင် – 003) – နံပါတ် 225၊ ဗျိုင်းရေအိုးစဉ် ရပ်ကွက် ၊ ၁၅၁ လမ်း ၊ ကျောက်မြောင်းဈေး မှတ်တိုင် ၊ တာမွေမြို့နယ် ၊ ရန်ကုန်မြို့။ ဖုန်းနံပါတ် – 09969947313 ကားမှတ်တိုင် – ကျောက်မြောင်းဈေးမှတ်တိုင်
MEDiCARE Myanmar (မအူကုန်းလမ် – 006) – အမှတ် 27/29 ၊ မြေညီထပ် ၊ မအူကုန်းလမ်း ၊ တာမွေ မြို့နယ် ၊ ရန်ကုန်မြို့။ ဖုန်းနံပါတ် – 09969947316
MEDiCARE Myanmar (နဝဒေး – 004) -အမှတ်25ဘီ၊ ဗိုလ်ရာညွှန့် နှင့် နဝဒေးလမ်းထောင့်၊ ဒဂုံမြို့နယ် ၊ ရန်ကုန်မြို့။ ဖုန်းနံပါတ် – 09969947314 ကားမှတ်တိုင် – ယောက်လမ်းကားမှတ်တိုင်
MEDiCARE Myanmar (စံရိပ်ငြိမ် – 007) – အမှတ် ၆၁ ၊ ၁ ရပ်ကွက် ၊ စံရိပ်ငြိမ် ၊ ကမာရွတ်မြို့နယ် ၊ ရန်ကုန်မြို့။ ဖုန်းနံပါတ် – 09969947317 ကားမှတ်တိုင် – စံရိပ်ငြိမ်မှတ်တိုင်
MEDiCARE Myanmar (လှည်းတန်း – 017) – အမှတ် ၉၉/၁၀၁ ၊ မြေညီထပ် ၊ ၈ရပ်ကွက် ၊ လှည်းတန်းလမ်း ၊ ကမာရွတ်မြို့နယ် ၊ ရန်ကုန်မြို့။ (အမှတ်၅ ကျောင်းေ့ရှ) ဖုန်းနံပါတ် – 0969947327 No (99/101), Ground Floor, 8 Ward, Hledan road, KaMarYaut township, Yangon
MEDiCARE Myanmar (Junction Square – 031) – ဒုတိယထပ် ၊ JS ၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်။ ဖုန်းနံပါတ်-09977638303
MEDiCARE Myanmar (ဗဟိုလမ်း – 033) – အမှတ် (၈၇)၊ ဗဟိုလမ်း၊ BRB ကားမှတ်တိုင်အနီး၊ ၃ရပ်ကွက်၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ရန်ကုန်။ ဖုန်းနံပါတ်-09977638731
MEDICARE Myanmar(ဦးထွန်းလင်းခြံလမ်း S- 038) – အမှတ်(၁၈)၊ဦးထွန်းလင်းခြံလမ်း၊ ၁ ရပ်ကွက်၊ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ရန်ကုန်မြို့။ဖုန်းနံပါတ် – 09977638562
MEDiCARE Myanmar (လှိုင်ဘူတာရုံလမ်း – 008) – အမှတ်၁၆ (ဘီ၁ ၊ စီ၁) မြေညီထပ် ၊ လှိုင်ဘူတာရုံလမ်း ၊ လှိုင်မြို့နယ်။ ဖုန်းနံပါတ် – 09969947318 ကားမှတ်တိုင် – အောက်ဘူတာရုံလမ်းမှတ်တိုင်
MEDiCARE Myanmar ( – 009) – No-46, Ground Floor, MyayNiGone Zay Street, Sanchaung Norht Ward, Sanchaung Township, Yangon Phone- 09969947319 ကားမှတ်တိုင် – မဟာမြိုင် (သို့) မြေနီကုန်း မှတ်တိုင်(E-Commerce)
MEDiCARE Myanmar (စံရိပ်ငြိမ် ဂမုန်းပွင် – 020) – ပထမထပ် ၊ စံရိပ်ငြိမ် ဂမုန်းပွင့် ရှော့ပင်းစင်တာ ၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ ဖုန်းနံပါတ် – 09977408340 ကားမှတ်တိုင် -စံရိပ်ငြိမ် မှတ်တိုင်
MEDiCARE Myanmar (အင်းစိန်လမ်း ၊ လှိုင် – 015) – အမှတ် ၂ ၊ အခန်း (၁ အေ) ၊ မြေနီထပ် ၊ ၉ ရပ်ကွက် ၊ အင်းစိန်လမ်း ၊ လှိုင်မြို့နယ် ၊ ရန်ကုန်။ ဖုန်းနံပါတ်-09969947325 ကားမှတ်တိုင် – ဆင်ရေတွင်းမှတ်တိုင်
MEDiCARE Myanmar (ပုဇွန်တောင် – 010 ) – အမှတ် ၆၀ ၊ မြေညီထပ် ၊ ရေကျော်လမ်း ၊ ၇ ရပ်ကွက် ၊ ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်။ Phone – 09969947320 No-60, YayKyaw Street,7Ward, Pazundaung Township, Yangon
MEDiCARE Myanmar (တောင်ဥက္ကလာပ – 011 ) – အမှတ် ၂၅၉၊ မြေညီထပ်၊ မေတ္တာလမ်း၊ ၁၀ ရပ်ကွက်၊ တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ Phone – 09969947321
MEDiCARE Myanmar ( တောင်ဥက္ကလာပ – 30) – အမှတ် 1042 ၊ သုမင်္ဂလာလမ်းမ ၊ ၄ရပ်ကွက် ၊ နန္ဒဝန် ဈေးအနီး ။ ဖုန်းနံပါတ် – 09 977638730
MEDiCARE Myanmar (တောင်ဥက္ကလာပ – 48) -အမှတ်-၈၈၉(က) ၊ သံသုမာလမ်း၊(၆)လမ်းရှေ့၊(၁၃) ရပ်ကွက်၊တောင်ဉက္ကလာပမြို့နယ်။ ဖုန်းနံပါတ် -09977638586
MEDiCARE Myanmar (လမ်းမတော် – 012 ) -အမှတ် ၂၈၅ ၊ မြေညီထပ် ၊ ၂ ရပ်ကွက် ၊ အနောရထာ နှင့် ၆ လမ်းထောင့် ၊ လမ်းမတော်မြို့နယ် ၊ ရန်ကုန်မြို့။ ဖုန်းနံပါတ် – 09969947322 ကားမှတ်တိုင် – မော်တင်ကားမှတ်တိုင်
MEDiCARE Myanmar (လမ်းမတော် – 018) – အမှတ် ၁၈၁ ၊ မြေညီထပ် ၊ အနော်ရထာလမ်း ၊ လမ်းမတော်မြို့နယ် ၊ ရန်ကုန်မြို့။ ဖုန်းနံပါတ် – 09969947328 ကားမှတ်တိုင် – ၁၅လမ်းမှတ်တိုင်
MEDiCARE Myanmar (သင်္ဃန်းကျွန်း – 021 ) နံပါတ် ၅ ၊ ပထမထပ် ၊ လေးထောင့်ကန်လမ်း ၊ လေးထောင့်ကန်ရပ်ကွက် ၊ သင်္ဃန်းကျွန်း မြို့နယ် ၊ ရန်ကုန်မြို့။ ဖုန်းနံပါတ် -09977408341
MEDiCARE Myanmar (သင်္ဃန်းကျွန်း – 014 ) – အမှတ် ၁၉ ၊ အခန်း အေ၁ ၊ မြေညီထပ် ၊ Sa-ka ရပ်ကွက် ၊ သင်္ဃန်းကျွန်း မြို့နယ် ၊ ရန်ကုန်မြို့။ ဖုန်းနံပါတ် -09969947324 ကားမှတ်တိုင် – ဘုရားလမ်းမှတ်တိုင်
MEDiCARE Myanmar (သင်္ဃန်းကျွန်း – 021 ) နံပါတ် ၅ ၊ ပထမထပ် ၊ လေးထောင့်ကန်လမ်း ၊ လေးထောင့်ကန်ရပ်ကွက် ၊ သင်္ဃန်းကျွန်း မြို့နယ် ၊ ရန်ကုန်မြို့။ ဖုန်းနံပါတ် -09977408341 (စံပြဈေး ကားမှတ်တိုင်)
MEDiCARE Myanmar (016) – No-577, MayDarWi Street, ZaMyinZwe ward, In front of ZaMyinZwe wet market, North Okkala Townhip, Yangon.
MEDiCARE Myanmar (ဈ)ဈေး – 016) အမှတ် ၅၇၇ ၊ မေဒါဝေလမ်း ၊ (ဈ) ရပ်ကွက် ၊ မြောက်ဥက္ကာလပ မြို့နယ် ၊ ရန်ကုန်မြို့။ ဖုန်းနံပါတ် -09969947326.. ကားမှတ်တိုင် – ဈ ဈေးမှတ်တိုင်
MEDiCARE Myanmar (မြောက်ဥက္ကလာပ – 29) – အမှတ် 986 ၊ ဇီဇဝါလမ်း ၊ ၂ ဈေးရှေ့ ၊ ၂ ရပ်ကွက်ဈေး ၊ မြောက်ဥက္ကာပမြို့နယ်။ ဖုန်းနံပါတ် – 09 977872142
MEDiCARE Myanmar (019) – အမှတ် 1575 ၊ အောက်မင်္ဂလာဒုံလမ်း ၊ ဖော့ကန်ရပ်ကွက် ၊ အင်းစိန် မြို့နယ် ၊ ရန်ကုန်မြို့။ ဖုန်းနံပါတ် -09969947329
MEDiCARE Myanmar (ထောက်ကြန့်- 022) – အမှတ်၂၈၊ ပဲခူးလမ်း ရပ်ကွက်၊ ထောက်ကြန့်(ထောက်ကြန့် လမ်းဆုံးအနီး)၊ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်။ ဖုန်းနံပါတ်-09977638535
MEDiCARE Myanmar (မြန်မာ့ဂုဏ်ရည်လမ်းး – 025 ) – အမှတ် ၁၄၁ (က) ၊မြေညီထပ်၊ ၈၉လမ်းနှင့် ၉ဝလမ်းကြား၊ မြန်မာ့ဂုဏ်ရည်လမ်း၊ မင်္ဂလာတောင်ညွန့် ။ ဖုန်းနံပါတ် – 09 977 872119
MEDiCARE Myanmar (ဒေါ်သိန်းတင်လမ်း – 026 ) – အမှတ် ၆၇/၆၉ ၊မြေညီထပ်၊ ဒေါ်သိန်းတင်လမ်း၊ ၈၉လမ်းထောင့်၊ မင်္ဂလာတောင်ညွန့် ။ ဖုန်းနံပါတ် – 09977872139
MEDiCARE Myanmar ( သာကေတ – 027) – အမှတ် ၄၂၊ အနော်မာလမ်းနှင့် ဇင်ဂမာလမ်းထောင့်၊ ၁ဈေးကွေ့အနီး၊ ၂ရပ်ကွက်၊ သာကေတမြို့နယ်။ ဖုန်းနံပါတ် – 09 977 872140
MEDiCARE Myanmar (ရေတာရှည်လမ်းသစ် – 28) – ရေတာရှည်လမ်းသစ်၊ ရာမညဝေဘူလကျောင်းတိုက်ရှေ့၊ ဗဟန်းမြို့နယ်။ ဖုန်းနံပါတ် – 09 977 872141
MEDiCARE Myanmar (သမိုင်းဘူတာရုံလမ်း – 032) – အမှတ် (၃၁)၊ အေ၂၊ မြေညီထပ်၊ ၂ရပ်ကွက်၊ သမိုင်းဘူတာရုံလမ်း၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်။ ရန်ကုန်။ ဖုန်းနံပါတ်-09977638302
MEDiCARE Myanmar (ကြည်မြင်တိုင် – 034) – အမှတ် (၇၉)၊ မြေညီထပ်၊ ဈေးကြီးလမ်း၊ မကျီးတန်းရပ်ကွက်၊ ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်။ ဖုန်းနံပါတ်-09977638525
MEDICARE Myanmar(ဘုရင့်နောင်လမ်း -039) – အမှတ်(၈၁၄)၊မြေညီထပ်၊ဘုရင့်နောင်လမ်း၊၃၂ရပ်ကွက်၊မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်၊ရန်ကုန်။ဖုန်းနံပါတ် – 09977638566
MEDiCARE Myanmar(ဦးဝိစာရလမ်း -046) – အမှတ်(၉၈)၊မြေညီထပ်၊ဦးဝိစာရလမ်း၊၄၁ ရပ်ကွက်၊မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်။ဖုန်းနံပါတ် – 09977638584
MEDiCARE Myanmar (ရန်ကင်း – 037) အမှတ် – (၂၊၁၀၃)၊ မြေညီထပ်၊ အရိယမဂ္ဂင်လမ်း၊ ရန်ကင်းမြို့နယ်။ ဖုန်းနံပါတ် -09977638559
MEDiCARE Myanmar(လှိုင်သာယာ -040)အခန်းနံပါတ် – 952(B)၊ဗိုလ်အောင်ကျော်လမ်း၊မီးခွက်ဈေး၊(၇)ရပ်ကွက်၊လှိုင်သာယာမြို့နယ်။ဖုန်းနံပါတ် – 09977638577
MEDiCARE Myanmar(သန်လျင် – 044)တိုက် A3(Corner Unit)၊Star City အိမ်ရာ၊သန်လျင်မြို့နယ်။ဖုန်းနံပါတ် – 09977638582
MEDiCARE Myanmar (ရွှေပြည်သာ – 049) – အမှတ် (၂၅၀)၊ဘုရင့်နောင်လမ်း၊ ဈ/၃၃ ၊ ၁၀ရပ်ကွက် ၊ရွှေပြည်သာမြို့နယ်၊ရန်ကုန်မြို့။ ဖုန်းနံပါတ် – 09977638589
MEDiCARE Myanmar(62 လမ်း – 041) – အမှတ်(၆/၁၄၀)၊၆၂ လမ်း၊မနော်ဟရီ နှင့် ဂေါ်သဇင်လမ်းကြား၊ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်၊မန္တလေးမြို့။ဖုန်းနံပါတ် – 09977638569
MEDiCARE Myanmar(35 လမ်း – 042) – အမှတ်(၂/၄၁၃)၊၃၅ လမ်း၊၆၈ လမ်း နှင့် ၆၉ လမ်းကြား၊မဟာအောင်မြေမြို့နယ်၊မန္တလေးမြို့။ဖုန်းနံပါတ် – 09977638570
MEDiCARE Myanmar(78လမ်း – 043) -အမှတ်(၆၅၁)၊၇၈ လမ်း၊၃၇ လမ်းနှင့် ၃၈ လမ်းကြား၊မဟာအောင်မြေမြို့နယ်၊မန္တလေးမြို့။ဖုန်းနံပါတ် – 09977638571
MEDiCARE Myanmar ( 73လမ်း -047) – အမှတ်(၆၈၄/၇၁-ခ)၊၇၃ လမ်း၊၃၆ လမ်းနှင့် ၃၇လမ်းကြား၊မဟာအောင်မြေမြို့နယ်၊မန္တလေးမြို့။ ဖုန်းနံပါတ်-09977638585
-တနင်္လာနေ့ မှ သောကြာနေ့အတွင်း ၄ နာရီမတိုင်ခင် အော်ဒါတင် ပြီး ပို့ဆောင်ရမည့်လိပ်စာသည် ရန်ကုန်မြို့တွင်းဖြစ်ပါက လူကြီးမင်း၏ကုန်ပစ္စည်းများကို မနက်ဖြန်အရောက်ပို့ဆောင်ပေးပါမည်။
-စနေနေ့နှင့် တနင်္ဂနွေနေ့ တွင်မှာယူပါက ၂ရက်အတွင်း ပို့ဆောင်ပေးမည်ဖြစ်သည်။
-ယနေ့ ၄ နာရီမတိုင်ခင် အော်ဒါတင် ပြီး ပို့ဆောင်ရမည့်လိပ်စာသည် ရန်ကုန်မြို့ပြင်ဖြစ်ပါက လူကြီးမင်း၏ကုန်ပစ္စည်းများကို သဘက်ခါပို့ဆောင်ပေးပါမည်။
*MEDiCARE Myanmar တွင်မှာယူပါကအီးမေးလ် နှင့် ဖုန်းနံပါတ်ကို မှန်ကန်စွာပေးရန်လိုအပ်ပါသည်။
-Medicare E-Commerceကိုစတင်မိတ်ဆက်သည့်အနေဖြင့် မြန်မာပြည်၏မြို့ပေါင်း ၁၀၀ ကိုစက်တင်ဘာ ၁၁ရက်နေ့မှစတင်၍ ပို့ဆောင်ခ ၁၀၀၀ ကျပ်ဖြင့်ပို့ဆောင်ပေးပါမည်။
-ပို့ဆောင်ခသည် လူကြီးမင်းမှာယူသော ကုန်ပစ္စည်း၏အလေးချိန်နှင့်အရွယ်အစားပေါ်မူတည်၍ ကျသင့်မည်ဖြစ်သည်။
Copyright 2021 © Medicare